Filtrer les éléments par date : lundi, 25 mai 2020
lundi, 25 mai 2020 21:39
Analamahitsy: Kamiao efa lany paikandro ny « visite technique » saika namoa-doza
Kamiao nitondra vatokely, tra-doza tetsy Analamahitsy Antananarivo ny 21 may 2020 teo no nitarika ny DGSR Madagascar na foibe fitsarana fiarakodia nanokatra fanadihadiana.
Nizaha ifotony ilay kamiao teny Analamahitsy ny ekipan'ny « Service des opérations et contrôles routiers » na SOCR, teo anivon'ny Foibe fitsarana fiarakodia, nahitana ireo mpanamarina ara-teknikan'ny fiarakodia ny 25 may 2020. Hita fa vokatry ny tsy fahatomombanana teo amin'ny tsindry hisatra no nahatonga ny loza.
Tamin’izany no nahitan’ny DGSR Madagascar fa lany paikandro tamin’ny 15 aprily 2020 teo ny fitsirihana ara-teknika an'ilay kamiao.
Tantsaha manao 300 000 Ariary ny kilao, ny mpividy mamaritra 20 000 Ariary. Mifamolaka ny tantsaha sy ireo mpanangom-bokatra tamin’ity andron’ny 25 may 2020 ity, nisokafan’ny tsenan’ny lavanila ato amin’ny faritra Sambirano Distrika Ambanja.
Tao Andimaka Ankifigny Kaominina Ambohimena no ambohim-pihaonana androany, saingy nirava maina indray toy ny mpiseho saika isan-taona.
Lavanila maitso na manta moa no vidiana amin'ny tantsaha, ka 5kg amin'izany manta izany no andrahoana sy karakaraina hanome 1kg lavanila azo ampiasaina sy ahondrana any ivelany.
lundi, 25 mai 2020 21:12
Alakamisy Fenoarivo: Voasambotra ny telo tamin’ireo jiolahy nanafika mpamongady
Poa-basy no nanaitra ny manodidina. Jiolahy efatra mitam-basy no nanafika mpamongady iray teto an-tananan’i Alakamisy Fenoarivo, Distrika Antananarivo Atsimondrano. Vola maherin’ny 14 tapitrisa Ariary hividianana entana no lasan’ireo olon-dratsy.
Voasambotra ny atoandro teo ihany ny telo tamin’ireo jiolahy, rehefa nifanenjehan’ny Zandarimaria sy ny Polisim-pirenena ary ny Fokonolona hatrany amin’ny Kaominina Soalandy Ankadivoribe
Mbola karohina ny jiolahy iray voalaza fa nitondra ny kitapo nisy ny vola.
lundi, 25 mai 2020 20:03
Antalaha: Naverin-dalana ny fiaramanidina hiazo an'i Maroantsetra
Niainga io maraina io ireo mpandeha niaraka tamin'ny mpanamory hiazo an'i Maroantsetra.
Nandalo fitiliana na barrage sanitaire ireo mpandeha tao Antalaha.
Tonga soamantsara tany Maroantsetra ny sidina, ary nipetraka teo amin'ny seranam-piaramanidina Maroantsetra.
Akory anefa ny hagagana fa tsy nahazo nivoaka ny fiaramanidina ireo mpandeha. Niezaka nitady fanazavana sy nandresy lahatra ny mpanamory fa tsy neken'ny lehiben'ny Distrika Maroantsetra, nefa raha ny toro-marika izay voarakitra anatin'ny NOTAM, dia i Toamasina 1 sy Toamasina 2, Faritra Atsinanana no voakasiky ny fepetra tsy ahafahana miditra sy mivoaka, fa ny Faritra Analanjirofo izay misy an'i Maroantsetra tsy tafiditra.
lundi, 25 mai 2020 19:36
Arrachart-Antsiranana: Lehilahy iray maty tsy tra-drano nofaohin’ny 4x4
Fiara 4X4 iray, nentina mpiasan’ny Fitsarana eto Antsiranana no nandona olona telo, lehilahy avokoa, teny amoron-dalana amin’ny lalam-pirenena faha-6 PK 699+500 akaiky ny vavahady hiditra ny Aéroport Arrachart ny alahady 24 may 2020. Maty tsy tra-drano ny iray tamin’ireo voadona, naratra ary nentin’ny Zandary namonjy hopitaly manarapenitra Antsiranana ny roa hafa.
Fandehanana mafy no voalaza fa niteraka ny loza. Nentina namonjy ny Toby Jeneraly Randrianasoavina ny mpamily sy ilay fiara nitera-doza, nisorohana ny mety ho fitsaram-bahoaka.
lundi, 25 mai 2020 19:26
Japon: Nofoanana ny hamehana ara-pahasalamana
Nambaran’ny Praiminisitra Shinzo Abe nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety androany fa feno ny fepetra ahafahana milaza fa foana manomboka amin’ity alatsinainy 25 may 2020 ity ny hamehana ara-pahasalamana nihatra manerana ny tanin’i Japon, fepetra noraisina nanoloana ny fisian’ny valanaretina Coronavirus.
Tamin’ny 16 janoary 2020 no nahitana tranga Covid-19 voalohany tany Japon tao amin’ny prefektoran’i Kanagawa. Nahatratra 16 628 voamarina fa nitondra ny tsimokaretina, 13 612 no efa sitrana ary 851 ireo namoy ny ainy tany amin’ity firenena ity.
lundi, 25 mai 2020 19:12
Inde: Niverina nisidina ny fiaramanidina
Nisidina ny habakabak’i Inde indray ny fiaramanidina nanomboka ity alatsinainy 25 may ity, rehefa nihiboka nandritra ny roa volana izay, noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19.
Mbola sidina anatiny ihany anefa aloha hatreto no misy, ary mbola faritra vitsivitsy no ahitana izany, satria misy ireo governora mbola misalasala ny handray sidina, noho ny tsy mbola ananany antoka ny tsy hihanahan’ny valanaretina.
Tamin’ny 30 janoary 2020 ny tranga voalohany Covid-19 tany Inde, olona avy any Chine no nitondra azy. Nahatratra 138 845 ireo olona voamarina fa mitondra tsimokaretina tany taorian’io, efa sitrana ny 57 721 tamin’ireo hatreto. Nisy 4 021 ireo namoy ainy.
lundi, 25 mai 2020 18:58
Bevalala-Antananarivo Atsimondrano: Hatao lavanty ny fananan’ny « Groupe Ny Rado »
Fitaovana sy kojakoja maromaro mikasika ny fanontana gazety, kojakoja amin’ny traktera maromaro. Santionany amin’ireo fananan’ny « Groupe Ny Rado » hatao lavanty ao an-tokontanin’ny CFP Bevalala - Antananarivo Atsimondrano amin’ny alakamisy 28 may 2020 izao ireo.
Fifanolanana tamin’ny Centre De Formation Professionnelle de Bevalala (CFP) no niafara amin’izao fanaovana lavanty ny fananan’ny « Groupe Ny Rado » izao.
lundi, 25 mai 2020 18:48
Imorona - Mananara Avaratra: Naolany ny zafikeliny vao 11 taona
Lehilahy iray 58 taona no nahavita nanao herisetra ara-nofo tamin’ny zafikeliny vavy vao 11 taona. Ny misandratr’andron’ny 22 may 2020 no nitranga ny fanolanana tao Imorona - Mananara Avaratra.
Nosamborin’ny Fokonolona niaraka tamin’ny Polisy Kaominaly ilay nahavanon-doza, ary natolotra ny Zandary ny atoandron’ny 23 may 2020. Notazomina avy hatrany natao famotorana io lehilahy io, izay mpamboly, ary hatolotra ny Fampanoavana.
lundi, 25 mai 2020 18:39
Lalam-pirenena faha-32: Kamiao iray nirehitra teny ampandehanana
Ny harivan’ny alahady 24 may 2020 no niseho ny loza tamin’ny lalam-pirenena faha-32, mampitohy Antsohihy sy Befandriana Avaratra. Nirehitra ampandehanana ny kamiao mitatitra vokatry ny tany. Tsy fantatra mazava ny niandohan’ny afo.
Tsy nisy aina nafoy. Nifamonjen’ny olona tonga nanome tanana ny namoahana ny entana tao anaty fiara. Niezaka ihany koa izy ireo namono ny afo, saingy nahery vaika izany, ary dia kila forehitra ilay kamiao.